Madaxweyne Farmaajo oo Shir isugu yeeray M/Maamulka Galmudug. – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Farmaajo oo Shir isugu yeeray M/Maamulka Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo oo Shir isugu yeeray M/Maamulka Galmudug.
Editor September 22, 2018 0
Muqdisho (Madal Furan) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray madaxda Dowlad Goboleedka Galmudug si loo soo afjaro xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee kasoo cusboonaaday deegaannadaas.
Wiil dhalinyaro ah oo saaka lagu dilay magaaladda Muqdisho iyadoo aan qoraxdu soo bixin
C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay siyaasad ka duwan midii horay loogaga bartay.
Wasiir Bayla oo sheegay in Bangiga adduunku ku qancay maamulka maaliyadda Soomaaliya